Archives des Andavamamba - Page 2 sur 2 - Midi Madagasikara
Andavamamba : Tokantrano telo voatafika
Redaction Midi Madagasikara 30 novembre 2013 Andavamamba, voatafika
Ny alin’ny alakamsiy hifoha zoma, tokantrano telo tao amina trano lehibe iray eny Andavamamba no notafihan’ny jiolahy roa nirongo basy sy nanao saron-tava. Araka ny loharanom-baovao, nihanika tamboho ireo mpandroba ireo ary rehefa tao an-tokotany ry zalahy dia nopitsohiny ny varavarana fidirana. Nivantana tao amina efitra iray izy ireo. Tsy nisy olona anefa tao ka niala…
Andavamamba : Raikitra ny fifampitifirana
Redaction Midi Madagasikara 28 novembre 2013 Andavamamba, Raikitra fifampitifirana
Nifampitifitra ny pôlisy sy ny jiolahy, omaly tokony ho tamin’ny iray ora maraina, tetsy Andavamamba. Raha ny fanamarihana azo dia nisy jiolahy nikasa handroba ny tokantrano iray tao an-toerana. Nisy nahatsikaritra anefa izany ka nahatonga an’ireo hiantso pôlisy avy hatrany. Poa toa izay dia tonga ny mpitandro ny filaminana, efa misy mihainohaino matetika rahateo eny…
Andavamamba nianjera norobaina: nianjera
Redaction Midi Madagasikara 28 novembre 2013 Andavamamba, norobaina
Toy ny mana avy any an-danitra ny fahitan’ireo jiolahy ny fianjeran’ny tovolahy iray vokatry ny lozam-pifamoivoizana. Raha mba tokony hanavotra azy ireo olona, ny môtô nentin’ilay tovolahy indray no avy hatrany dia nalain’ireo. Soa fa mba sendra nisy pôlisy teo amin’ny manodidina teo. Io no niditra an-tsehatra avy hatrany tamin’ny fanenjehana ireo olon-dratsy. Tsy lasa…
Lutte contre le tabac à Madagascar: Les membres du Service de contrôle de la police formés
webmaster 18 novembre 2013 Andavamamba, contre le tabac, Lutte, OFNALAT
Les représentants de l’Office National de Lutte Anti-Tabac (OFNALAT) se sont réunis hier au Live Hôtel Andavamamba pour un atelier sur l’application de l’article n°8 de la Charte Internationale sur la lutte anti-tabac, afin de former les membres du Service Contrôle de la Police Nationale sur la lutte contre le tabagisme dans les endroits interdits.…